प्रतिपक्षसँग संवादै नगरी बस्दैछ संसद बैठक, यस्ता छन् सत्तापक्ष र विपक्षीका रणनीति « AayoMail
प्रतिपक्षसँग संवादै नगरी बस्दैछ संसद बैठक, यस्ता छन् सत्तापक्ष र विपक्षीका रणनीति
2021,14 September, 8:54 am
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निरन्तर हुलदंगा गर्दै आएको नेकपा एमालेले आजको बैठक पनि चल्न नदिने भएको छ।
जारी नवौं अधिवेशनका हरेक बैठकहरू प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले रोक्दै आएको छ। आइतबारको बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरुले अवरोध गरेपछि सोमबार सभामुख अग्नी सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। तर त्यसमा प्रतिपक्षी एमाले भने सहभागी भएन।
एमाले उपस्थित नभएपछि सभामुखले सर्वदलीय बैठक त गरे र मुख्य मुद्दा एमालेसँगै जोडिएका कारणा निष्कर्ष भने आउन सकेन।
बैठकमा सहभागी सत्ता गठबन्धनलगायत सबै दलका नेताहरूले एमालेलाई पनि सहभागी गराउन र उसँग संवाद अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए।
त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले सहमतिमा नआए पनि विधेयक पास गर्नुपर्ने बताएका थिए।
एमालेले भने आफूहरूसँगको मुद्दामा अरू पार्टीलाई छलफल गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताएको छ। आयोमेलसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने– ‘नाटक गरेर सबै पार्टीसँग बसेर छलफल गर्न खोज्नुभयो। यो एमालेसँगको समस्या हो। हामीसँग मात्रै बसेर छलफल गरेर समाधान निकाल्ने हो। हाम्रो समस्यमा शेरबहादुर, प्रचण्ड अनि माधव नेपाल र उपेन्द्रहरू किन बोलाउनुपर्‌यो? त्यो देखाउनका लागि मात्रै हो। एमालेसँग डाइरेक्ट समाधान खोजे भइहाल्यो नि।’
आजको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। तर त्यो बजेटलाई केही थपघट गरेर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयकबाट नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
देउवा सरकारलाई यही भदौ ३० गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्नुपर्ने दबाव छ। संसदमा अध्यदेश पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्ने प्रावधान छ।
आजको बैठकमा सरकारले यो प्रतिस्थापना विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। तर एमालेले फेरि पनि अवरोध गर्ने जनाएको छ।
एमालेसँगको विवाद के हो?
एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही भएको सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने शर्तहरू अघि सारेको छ।